induction အပူ, ထားဝယ် induction အပူပစ္စည်းကိရိယာများ၏အားသာချက်များ
သော induction အပူ၏အားသာချက်ကဘာလဲ, brazing, hardening, အရည်ပျော်နှင့် Forge, etc?
အဘယ်ကြောင့်သော induction အပူကိုရှေးခယျြ ? ပွင့်လင်းမီးလျှံ, convection, တောက်ပသို့မဟုတ်အခြားအပူနည်းလမ်းကျော်ဤတွင်ခေတ်သစ်အစိုင်အခဲပြည်နယ်သော induction အပူပိန်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းသောအဓိကအားသာချက်တစ်ခုအတိုအကျဉ်းချုပ်င်:
induction အပူ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းပြောင်းအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသူ့ဟာသူအတွင်းသွေးဆောင်သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်ထုတ်ကုန် warpage၊ ပုံပျက်ခြင်းနှင့်ပယ်ချခြင်းနှုန်းသည်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ အများဆုံးထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအဘို့, အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအောက်စီဂျင်၏သက်ရောက်မှုကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လေဟာနယ်, inert သို့မဟုတ်လေထုကိုလျှော့ချနှင့်အတူတစ် ဦး ပူးတွဲအခန်းထဲကအထီးကျန်နိုင်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် induction သည်လျင်မြန်စွာအလုပ်လုပ်သောကြောင့်၊ အပူအစိတ်အပိုင်းအတွင်း၌ (<2000 စက္ကန့်အတွင်း>> 1ºအက်ဖ်) ကိုတိုက်ရိုက်နှင့်ချက်ချင်းတီထွင်ထုတ်လုပ်သည်။ startup နီးပါးချက်ချင်းဖြစ်၏ အဘယ်သူမျှမနွေးသို့မဟုတ်သံသရာချအအေးလိုအပ်သည်။ ဝေးလံခေါင်သီသောမီးဖိုareaရိယာသို့မဟုတ်ကန်ထရိုက်တာများသို့အစိတ်အပိုင်းများကိုများများပို့ခြင်းမပြုဘဲ၊ ဥပမာအားဖြင့်ယခင်ကအချိန်ကုန်။ off-line အသုတ်အပူပေးစနစ်ကိုလိုအပ်သောကြေးနီသို့မဟုတ်ဂဟေဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းသောထုတ်လုပ်မှုစနစ်ဖြင့်အစားထိုးနိုင်သည်။
ပွင့်လင်းမီးလျှံ, မီးရှူးတိုင်အပူနှင့်အခြားနည်းလမ်းများနှင့်အတူ။ စနစ်စနစ်တကျချိန်ညှိခြင်းနှင့်ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့မှန်းဆအလုပ်သို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲမျှမသည်ရှိ၏, အပူပုံစံပြန်လုပ်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ခေတ်သစ်အစိုင်အခဲပြည်နယ်စနစ်များနှင့်အတူတိကျသောအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်ယူနီဖောင်းရလဒ်များကိုထောက်ပံ့; အာဏာကိုချက်ချင်းဖွင်သို့မဟုတ်ပိတ်ကိုပိတျထားနိုငျသညျ။ တံခါးပိတ်ကွင်းဆက်အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူအဆင့်မြင့် သော induction အပူစနစ်များ တစ် ဦး ချင်းစီအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏အပူချိန်ကိုတိုင်းတာရန်စွမ်းရည်ရှိသည်။ သီးခြားတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ကိုင်ခြင်းနှင့်လျှော့ချခြင်းနှုန်းထားများကိုတည်ဆောက်နိုင်ပြီးလုပ်ဆောင်သောအပိုင်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်အချက်အလက်များကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။
induction အပူစနစ်များ အစဉ်အလာကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာကိုမီးမရှို့ဘူး, သော induction ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးပါမည်သည့်သန့်ရှင်းသော non-ညစ်ညမ်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ဦးသော induction စနစ်ကအခိုးအငွေ့သည်စွန့်ပစ်အပူ, noxious ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်အသံကျယ်ဆူညံသံဖျက်သိမ်းရေးအားဖြင့်သင့်န်ထမ်းများအတွက်အလုပ်လုပ်သောအခြေအနေများတိုးတက်ကောင်းမွန်။ အပူဘေးကင်းလုံခြုံနှင့်အော်ပရေတာအန္တရာယ်ဒါမှမဟုတ် process ကိုဖုံးကွယ်ဖို့မပွင့်လင်းမီးလျှံနှင့်အတူထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ non-ကူးမှုပစ္စည်းများထိခိုက်ကြသည်မဟုတ်ခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲအပူဇုံနီးစပ်နီးကပ်တည်ရှိသောနိုင်ပါသည်။
* Save ကိုစွမ်းအင်
utility ကိုဥပဒေကြမ်းများကိုတိုးမြှင့်ပင်ပန်းနေပြီလား ဤသည်ထူးခြားစွမ်းအင်ထိရောက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အသုံးဝင်သောအပူသို့စွမ်းအင်အသုံးစွမ်းအင် 90% အထိပြောင်းပေး; အသုတ်မီးဖိုယေဘုယျအားဖြင့်သာ 45% စွမ်းအင်ထိရောက်ဖြစ်ကြသည်။ သော induction အဘယ်သူမျှမနွေး-up, သို့မဟုတ်အေးမြ-Down သံသရာလိုအပ်ပါတယ်ကတည်းကနှင့်အညီ, မတ်တပ်ရပ်ဖြင့်အပူဆုံးရှုံးမှုရှင်းလင်းသောနိမ့်ဆုံးသို့လျှော့ချနေကြသည်။ အဆိုပါပြန်လုပ်နှင့် induction လုပ်ငန်းစဉ်၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုစွမ်းအင်ထိရောက်အလိုအလျောက်စနစ်များနှင့်အတူကအလွန်အမင်းသဟဇာတပါစေ။
သော induction အပူ၏အားသာချက်များ